﻿Download Ulimi Lwethiphu Yeskrini yeMicrosoft Office from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
Imikhiqizo YandawonyeWindowsOfficeUkwesekwaImibuzo ephakama njaloIzibuyekezo ze-Microsoft<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://download.microsoft.com/download/9/7/3/9731A8AE-2A01-43D7-ACB1-87F96D194A2E/ScreenTipLanguage-zu-za-32bit.exe" />Thank you for downloading
ScreenTipLanguage-zu-za-32bit.exeRecommendedClick here1.8 MBClick here1.8 MB
ScreenTipLanguage-zu-za-64bit.exeRecommendedClick here1.8 MBClick here1.8 MB
Klikha kubhathini yeFayela le-Office, khetha Izinkethi, khetha Ulimi bese ubeka Ulimi Lwethiphu Yeskrini ku 'Fana Nolimi Oluveziwe'. Ukukhipha lokhu okulandiwe:
Kwimenyu ethi Qala, yiya ku Iphaneli Yokulawula. Klikha kabili okuthi Ngeza/Khipha Izinhlelo. Kolokuqala ezinhlelweni ezifakiwe njengamanje, khetha Ulimi Lwethiphu Yeskrini yeMicrosoft Office, bese uklikha Khipha noma Ngeza/Khipha. Uma ibhokisi lengxoxo livela, landela imiyalo yokukhipha uhlelo. Klikha Yebo noma OK ukuqinisekisa ukuthi ufuna ukulukhipha uhlelo. Amafayela Alandwayo Athandwa KakhuluImikhiqizo Yandawonye